Integration Amazon - Propars E-export kunye Amazon, Ebay, Allegro kunye Etsy
Kulula ukulawula ivenkile yakho ye-Amazon.com ngePropars!
Ngenisa iimveliso zakho kwiiPropars kwaye uzithengise kwiAmazon, elona qonga likhulu le-e-commerce emhlabeni!
NgePropars, ukudityaniswa kweAmazon, qala ukuthengisa kuwo onke amazwe apho iAmazon isebenza khona, ngakumbi eMelika, eYurophu nakwiPeninsula yaseArabia!
Ii-odolo zakho ezivela eAmazon ziqokelelwe kwiscreen esinye nazo zonke ezinye iiodolo zakho.
Ungazithengisa iimveliso ozongeza kwiPropars kwiAmazon ngonqakrazo olunye.
Kutheni abantu bethenga kum emva kokuvula ivenkile eAmazon?
"Kukhethwa kwintengiso kwiAmazon
Kukuthembeka kohlobo lweAmazon, hayi ivenkile yakho. "
Iibhlog zePropars: Kutheni le nto kufuneka ndithengise izinto ezili-15 kwiAmazon?
Ukujoyina iAmazon kwisiqingatha sokuqala se2020
inani labathengisi 651.000. Nanamhlanje 3.145Ngeyure 131, 2 abathengisi ngomzuzu
kuthetha. IAmazon kwireyithi ephakathi yangoku
1.1 abathengisi bathatha inxaxheba rhoqo ngonyaka.
Ukuthengisa kwi-Amazon.com kubonakala ngathi iphupha lizaliseka kumashishini amaninzi. Nangona kunjalo, ukuvula ivenkile kunye nokuthengisa kule marike inkulu kulula kakhulu kunokuba ucinga. Ukuze ukwazi ukuthengisa kwi-Amazon kunye nokuhlanganiswa kwePropar-Amazon, kwanele ukuba ube nokubhaliswa kwerhafu esebenzayo eTurkey. Ukuba unerekhodi yerhafu, konke okudingayo ziiPropar ukuze ube ngumthengisi kweyona ndawo yentengiso inkulu yehlabathi!
Ukuba yinkampani yokuqala kunye neyodwa eTurkey ukudibanisa ne-Amazon.com, i-Propars ikwakuluhlu lwe-Amazon SPN kwaye liqabane lesisombululo se-Amazon eTurkey.
Unokulawula zonke iivenkile zakho kwindawo enye ngokudibanisa ezinye iivenkile zakho ezibonakalayo kwiphaneli yePropar, apho uya kuthengisa kwiAmazon.com.
I-Amazon.com Eyona ndawo yeMarike inkulu kwihlabathi
IAmazon yeyona ndawo inkulu ye-e-commerce yehlabathi enabasebenzisi abasebenzayo abangaphezu kwezigidi ezingama-300 kunye nengeniso yemihla ngemihla engaphezulu kwebhiliyoni yeedola. Ukuba ngumthengisi kule ecosystem kuthetha ukuhambisa iimveliso zakho kwihlabathi liphela. Izibuko elilula nelikhuselekileyo kwishishini elifuna ukwenza i-e-Export.
Ukongeza, ulwazi lophawu lweAmazon kunye nokuthembeka kukukhusela kwiindleko ezinkulu ezinesiphelo esingaqinisekanga.
Iimveliso zakho, eziza kuthengiswa nge-USD kwi-Amazon.com, ziya kufumana ixabiso kwi-TL kwaye zandise inzuzo yakho. I-E-Export ikunika izigidi zabathengi abanokubakho kunye nokufumana ngaphezulu kwamaxabiso otshintshiselwano lwangaphandle.
Ukuseta iSitorethi sokuDityaniswa kweAmazon
Ukuseka ivenkile kwi-Amazon.com yinkqubo enzulu kwaye ibuhlungu. Ngesi sizathu, qiniseka ukuba uwalungisa amaxwebhu akho ngokuchanekileyo nangokupheleleyo. Amaxwebhu eshishini lakho eTurkey ayasebenza kwiAmazon.
Ungalibali ukuba unokufumana inkxaso yobuchwephesha ehambelana nale nkqubo kwiqela lePropar. Xa kuthathwa amanyathelo afanelekileyo, inkqubo yokumisela ivenkile yinqanaba elinokuthi lidluliselwe ngokukhawuleza kwaye kulula. Ngaphezu koko, ukuba sele unevenkile yaseAmazon, kuthatha imizuzwana embalwa ukuyidibanisa kwiphaneli yakho yePropar.
Ungafikelela kwingcali ye-Propar ngoku ukufumana ulwazi oluthe kratya malunga noseto lwevenkile kunye nokudityaniswa.
NgePropar, iqabane leshishini leAmazon eTurkey, kunokwenzeka ukuba ishishini ngalinye lithengise kwiAmazon. Ezinye zeempawu onokuzuza kuzo kwiPropars-Amazon indibaniselwano zilandelayo;
-Uluhlu lweemveliso kwiAmazon.com,
-Ulawulo lweodolo kunye ne-invoyisi yasimahla,
-Ukulandelela isitokhwe ngokuzenzekelayo,
-Ithuba lolawulo lwaseTurkey,
-Ulwimi oluzenzekelayo kunye noguqulelo lokulinganisa,
-Inkxaso yokuseta ivenkile,